Fanadihadiana ny tanora : miteraka voka-dratsy ny zava-mahadomelina | NewsMada
Fanadihadiana ny tanora : miteraka voka-dratsy ny zava-mahadomelina
Variana amin’ny zavatra mitondra sentosento fotsiny ny tanora malagasy, amin’izao fotoana izao, fa tsy manana vina amin’ny hoaviny. Anjaran’ny fitondrana ny mametraka fandaharanasa ho azy ireo hananany antoka fa misy azo antenaina hanatsara ny fiainany.
Nikarakara adihevitra niompana amin’ny tanora sy ny fandriampahalemana ny fikambanana Observatoire de la jeunesse, sehatra mandinika ny fiainan’ny tanora, niforona ny taona 2013. Anisany nitondra ny fahitany ny zava-misy manodidina ny lohahevitra, omaly, teny Antaninarenina ny depiote sy ny manampahaizana momba ny tanora.
« 16 taona ny salan-taonan’ny Malagasy 23 tapitrisa, araka ny fahitan’ny mpandinika azy amin’izao fotoana izao. Mbola ao anatin’ny sokajin’ny adolantsento izany ary tsy mahafehy ny tenany matetika fa mbola adoladolan’ny sento », araka ny fanazavan-dRamamonjisoa Haja, manampahaizana momba ny ady amin’ny zavamahadomelina, omaly teny Antaninarenina. Momba ny fahalalana, ny 20%-n’ny vehivavy tsy nandia sekoly raha 17% ho an’ny lehilahy. Amin’ny mpianatra 100 miditra amin’ny kilasy garabola, tokana monja no tody hatramin’ny oniversite. Ho an’ireo 16 taona maro anisa indray, telo taona ihany ny faharetan’ny fianarana vitany amin’ny ankapobeny. Marefo, noho izany, ny tanora ary mitady ny zavatra mitondra sento : ny zava-mahadomelina (toaka, sigara, rongony..) ary ny fanaovana firaisana ara-nofo. Ny zava-mahadomelina, miteraka herisetra hatrany. Manaporofo izany, manodidina ny 20-25 taona eo ho eo avokoa ny olona voafonja. Aminy manokana, vahaolana ny fanabeazana sy ny fametrahana rafitra mifanaraka amin’ny adolantsento fa tsy zavatra avo lenta toy ny zava-misy, amin’izao fotoana izao eto amintsika.
Tsy manana antoka ka manaotao foana
Ho an’ny depiote Razafitsiandraofana Jean Brunelle, rehefa tsy manana antoka ho an’ny ampitso sy ny hoaviny ny tanora, lasa manaotao foana. Tokony hametraka fandaharanasa ho an’ny tanora voavolavola, araka ny zava-misy eto amintsika ny fitondrana. Nohamafisiny fa manana hevitra tsara ny mpanao politika amin’ny vina fampandrosoana entiny. Rehefa tonga eo amin’ny toerana nokendreny, tsy maintsy manaraka ny tombontsoan’ny mpamatsy vola nahatonga azy teo amin’io toerana io ny tenany fa mandefitra ilay tena fampandrosoana niaingana. Nampiseho talenta tamin’ny slam koa i Little Jo, nampisongadina ny zavatra iainan’ny tanora mitovy aminy.
Miainga amin’ny fanadihadiana eny ifotony
Nanao fanadihadiana teny anivon’ny faritra maromaro (Antsirabe, Morondava, Toliara, Antananarivo…) manerana ny Nosy ny Observatoire de la jeunesse ny volana jolay lasa teo, momba ny tanora sy ny fandriampahalemana. 800 ireo nanontaniana ny fahitany izany sy ny antony miteraka ny tsy fandriampahalemana. Nivoitra fa antony voalohany ny fahantrana, ny asa tsy manara-penitra fa lasa “sera” fotsiny, ny zava-mahadomelina, ny tsy fitovian-kevitra, araka ny fanazavan’ny filohany, Ratsida Lanto. Homena ny mpanapa-kevitra ny valin’ny fanadihadiana natao sy hanampy ireo tanora manao sisin-kevitra ho fanatsarana ny fikarakarana azy ireo manokana.